Nhau dzeZimbabwe, 26 Kukadzi 2019
Chipiri 26 Kukadzi 2019
VaChamisa Vanobuda Munyika Vachisiya VaMudzuri Vari paNyanga
Mutungamiri weMDC, VaNelson Chamisa, vabuda munyika vachishanyira nyika dzemuAfrica vachidzizivisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Zimbabwe Inombochengetedza Mukuru Mukuru Anomirira Vashandi muAfrica
Munyori mukuru wesangano reInternationl Trade Union Confederation, ITUC, mudunhu reAfrica, VaKwasi Adu Amankwa, avo vasvika munyika neChipiri, vapedza zuva rese vakachengetedzwa nevebazi rinoona nezvekupinda munyika, vakazoburitswa kuti vadzokere kuhotera kwavo.
Kunetsa kweMafuta Kwokonzera Dambudziko kuVafambi
Vamwe vanoti dambudziko iri rakawedzerwa nekubuda kunon zi kuri kuita vemabhazi vakawanda muhurongwa hwehurumende nevemabhazi ava huri pasi pekambani yehurumende yeZUPCO.
United Nations Inoti Vanhu Mamiriyoni Mashanu Vatarisana neNzara muZimbabwe
.Mutungamiri weUnited Nations kubazi rezverubatsiro kana kuti United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, VaMark Lowcock vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe kutanga mangwana kusvika musi 1 Kurume.
Mapurisa Akapakatira Zvombo Otsvaga Muzvare Mamombe Uko VaMahiya Vachisungwa
Mapurisa gumi nemanomwe ainge akapakatira zvombo akayedza kupinda zvine chisimba nezuro manheru kuGlennorah kumba kwamai venhengo yedare reparamende yeMDC inomirira Harare West Muzvare Joanna Mamombe vachiti vari kuvatsvaga.
Kukadzi 25, 2019
Nyanzvi dzezveHutano Dzokurudzira Vanhu Kuzvidzivirira Kana Vachiita zvepaBonde
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti veruzhinji vanofanirwa kuita zvepabonde vakazvidzivirira kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvepabonde, kana kuti Sexually Transmitted Diseases.
Sangano reAmnesty International muZimbabwe Ropomerwa Mhosva yeKusashandisa Mari Zvakanaka
Sangano rinorwirwa kodzero dzevanhu, reAmnesty International Zimbabwe, rinoti wongororo yemabhuku aro emari inoratidza kuti sangano iri rakarasikirwa nemamirioni mazhinji emadhora.
Vagari veDhorobha reMasvingo Vochemachema neKudzimwa kweMagetsi
Vamwe vanoti kuenda kuri kuita magetsi kunovarangaridza zvaiitika mugore ra 2008, ukuwo kambani yemagetsi iyi isiri kuvapa tsananguro yekuti seyi magetsi ari kushaika.
Kukadzi 24, 2019
Mutungamiri weMDC VaChamisa Voronga Kupa VaMnangagwa Nguva Pfupi Yekuita Nhaurirano
VaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nguva shoma-shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo VaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pahutungamiri nenzira iri pamutemo.
MDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa ichaita musangano neSvondo muGweru wekutenda vatsigiri vayo vakaivhotera musarudzo dzakaitwa gore rakapera.